Raiki-pitia tamin’ny vehivavy manambady — izany No fanantenana
Taorian’ny ny farany fiatoana-ny, ny ratsy indrindra ho anao.
Fa mandritra izany fotoana izany, ianao faly aho fa ianao miaraka amin’ny mpiara-miasa Taloha, satria faly na tsy amin’ny fotoana ela. Ary avy eo dia tonga indray mandeha eo amin’ny fiainana. Roa taona tanora kokoa noho ny anao, izany ny tantara. Izay ihany izy, tsy nisara-panambadiana na izany aza, tsia, tsy tapaka indray mandeha. Dia hitsena azy, fa ianao mahafantatra izay an-trano miandry ny olona any ianao sy ny zanakao dia namihina anao tonga soa eto ianao. Maro ny olona manana raharaha (na lehilahy na vehivavy), dia tsy ho vonona ny hisaraka ny tenanao avy amin’ny vady, ary avelao ny taloha ny fiainana aoriana. Farany, ny fiainana amin’izao fotoana izao ny toe-draharaha amin’ny tombontsoa maro. Ny vadiny mikarakara ny raharaha ara-bola, dia tsy maintsy tsy Manahy, raha tsy tonga irery, ary koa ny firaisana ara-nofo tsy mandeha, misaotra anao, tena mampitolagaga ho anao. Izany no antony ho ny Raharaha, matetika nandritra ny volana na taona maro miaraka foana ny fampanantenany izy. Dia voalaza indray mandeha ianao, toy ny amin’ny hoavy ny mihazakazaka. Ary raha Eny, inona no nataon izy namaly hoe. Ireo fanambarana dia tsy foana ny fampanantenany izy.
Izy te-hiaro anao mafana
Fantatrao fa ianao efa tafiditra amin’ny fihetseham-po sy ny zavatra rehetra dia atao ny mahita anao. Ary izany indrindra izany zava-misy izany no mahatonga ny fampiasana. Indrindra fa ny didim-pitsarana»hanome Izany no handratra ny vadiko be, ahy vitsy kokoa ny volana,»dia nifty harato, fa tsy mba nataony ho anao. Ny vadiny izay nandainga izy mba ho an’ny volana sy ny hosoka, tsy te handratra anao mazava ho azy, fa mba nampalahelo anareo vonona ny tsy misy olana ho azy, na dia tia anao ny»dia be». Inona no azontsika ianarana avy teo aloha hevitra. Tena mihazakazaka izany, dia tsy afaka manohy manararaotra. Tsy mahay maneho hevitra mazava fa tsy te-ho lasa intsony fa ianao zavatra Marim-maniry, ary izy ireo dia tokony ho momba ny fihetseham-pony mazava. Maimaim-poana ny tenanao avy ny hevitra fotsiny fa manapa-kevitra kokoa ny faharetana, mbola mila manome bebe kokoa ny fotoana ho anao. Rehefa afaka izany, dia afaka na inona na inona intsony hihaino avy aminao.
Tsy misy hafatra, tsy antso
Tsy maintsy fantatrareo fa tsy aoka ianao mba manambany ny lalao baolina na saribakoly fa foana ny eo an-toerana, raha ny marina rehefa afaka izany. Tsarovy ity, azafady: Raha toa ianao foana ao an-toerana, dia mihazakazaka ny kely am-pofoany ny alika aoriana. Ny olona mihazakazaka rehefa ny vehivavy, mazava ho azy, dia ho an’ny vehivavy fa olona ratsy tarehy. Asehoy ny tenanao sy ny zava-dehibe fa ny lehilahy side sy miandry, raha sy rehefa izy hazo. Voalohany indrindra aloha, raha ianao no teo amin’ny toerana, ho anao ny toe-Draharaha tsy mahazo aina ary tsy mila mieritreritra momba ny mety ho vahaolana. Ny olona izay efa voafitaka indray mandeha, miezaka ny mampiasa azy io amin’ny manaraka Mba hanao ny fifandraisana. Ny intsony ny raharaha dia efa ka nihazakazaka teo amin’ny roa anao, ny kokoa ianao dia mananihany sy lainga ny vadiny. Alaivo sary an-tsaina, noho izany, voatery ny fanontaniana raha toa ka tianao mihitsy amin’ny vehivavy toy izany eo amin’ny fifandraisana. Farany, afaka mamelana ny anjarany sy ianao handeha mba ho soloina rehefa afaka fotoana fohy ihany koa ny avy amin’ny Olona vaovao. Ianao no nanao ny fifandraisana sakana, dia tena anjaranareo ny manova ny toe-Draharaha. Iza no mahalala, angamba izy no mianjera ao amin’ny fitiavana tena ho anao, sy ny hazo tao anatin’ny herinandro miaraka aminao, fa ianao nilaza ny vadiny avy aminao, ary ianao no mitady ny trano vaovao. Zava-dehibe tsy izay ihany ianao indray ny taloha ny Drafitra. Ny tianao lazaina dia hoe, izy manontany anao ny Fivoriana, nanontany ianao, te-hiafara any am-pandriana sy ianao indray mandeha indray afaka fotsiny foana ny fampanantenany izy. Ianao ilay mpanefy vy ny fahasambarana. Aza manao ny tenanao tsy faly amin’ny volana, na dia Taona mandany, vehivavy manenjika azy, izay raha tsorina mazava fa eo amin’ny lafiny dia kely na tsy misy ny fihetseham-po ho anao. Raha vao mazava tsara fa tsy miala, dia tsy maintsy hamaranana ny raharaha, ka ianao manao ny tenanao ho faly sy ianao handeha mba ho vaovao misokatra ho an’ny vehivavy.
Tsy afaka ny hanadino fotsiny
Tsy afaka manao izany fotsiny dia aoka ny fihetseham-po ho azy aoriana ianao, na dia tianao ho an’ny tena, ary te-tanteraka. Avy eo dia jereo ao amintsika rehefa avy mpanadala coaching. Ny fitia ny manam-pahaizana mba hanampy anao hahazo lavitra azy sy ny vehivavy hafa mba hihaona amin’ny tena miahy anao. Izahay dia miandrandra ny fifandraisana
← Mampiaraka Ad Network
Free Mampiaraka toerana fisoratana anarana →